Nyowani KDE Plasma Dzidzo ye Chakra Linux Yakagadzirira | Linux Vakapindwa muropa
Nyowani nyowani kuKDE Plasma yeChakra Linux yakagadzirira
Chakra Linux Project ndeye GNU / Linux Distribution yakanangana nekushandiswa kwe KDE. Chakra chirongwa chinouya kubva ku KDEmod chirongwa (KDE modular software mapakeji eArch Linux).
Chakra Project yakatangwa nevagadziri ve KDEmod, avo vakasarudza kugadzira CD mhenyu zvichibva paArch Linux.
Chinangwa cheChakra Project chaive chekushandisa desktop iyo iri nyore kushandisa asi ichichengetedza zvese maficha, kujekesa, simba, uye kuzvidavirira kweArch Linux, zvichibva pane KISS musimboti.
1 Nezve iyo Chakra Linux kugovera
2 Nezve nyowani yeKDE Plasma inogadziridza paChakra Linux
3 Chakra Linux kugadzirisa
Nezve iyo Chakra Linux kugovera
Chakra inosanganisira zvese zvemahara uye zvine software, kunyangwe iyo yekupedzisira inogona kuremara panguva yekuisirwa. Iyi chete inowanikwa kwema 64-bit architecture , sezvo 32-bit rutsigiro rwakabviswa.
Chakra haina kuronga kuburitswa kwemazuva chaiwo, asi inoshandisa "Half-rolling release". Izvi zvinoreva kuti mapakeji makuru eChakra (magirafu, odhiyo, nezvimwewo) akaomeswa nechando uye anongogadziridzwa kugadzirisa matambudziko ekuchengetedza
Aya mapakeji anovandudzwa mushure mekunge shanduro dzichangoburwa dzave kuyedzwa zvizere dzisati dzaendeswa kunzvimbo yekusingaperi (ingangoita mwedzi mitanhatu yega yega).
Izvi zvinobvumidza kuve neyakagadzika base yekuona kugadzikana kune mamwe mapurogiramu.
Iwo mamwe mashandisirwo (webhurawuza, mitambo, vatambi venhau, hofisi suites, nezvimwewo) zvinowedzeredzwa zvichiteedzera kuburitsa modhi uye zvinowanzo kuwanikwa nekukurumidza mushure mekuburitswa.
Nezve nyowani yeKDE Plasma inogadziridza paChakra Linux
Zvingaitwe sei, Chakra Linux yakagamuchira iwo akasiyana meseji yeiyo system desktop nharaunda.
Chakra Linux yagamuchira iyo nyowani shanduro dze KDE Plasma 5.13.4 uye izvo zvekuvandudzwa ku KDE Zvishandiso 18.08 uye KDE Zvimiro 5.49.
Pakutanga kwaChikunguru 2018, Chakra Linux vashandisi vakawana yazvino vhezheni yakagadzika yeKDE Plasma 5.13 desktop nharaunda, uye ikozvino, ivo vanogona kusimudzira kumisikidza kwavo kune ichangoburitswa vhezheni yeKDE Plasma 5.13.4, iyo inotakura anopfuura makumi mashanu bug bug fixes. .uye kuvandudza.
Pamusoro pezvo, vashandisi vanogona kuisa yazvino KDE 18.8 uye KDE Frameworks 5.49 yekushandisa software mapakeji.
En chiziviso chepamutemo naNeofytos Kolokotronis akataura zvinotevera:
“Mune yako inotevera system yekuvandudza, iwe unogashira ese azvino shanduro dzeplasma application uye kde masystem, kuwedzera kune zvakajairika mapakeji ekuvandudzwa. Iko kune nyowani yakateedzana ye18.08 kunyorera, iine zvigadziriso kusimudzira mashandisirwo uye kugadzirwa, uye wedzera matsva maficha.
Sekureva kwaNeofytos Kolokotronis, kugadzirisa zvivakwa zvayo zvehunyanzvi hweKDE zvichangobva kutaurwa mukuburitswa.
Vanoshandisa Chakra Linux vanofanirwa kuziva kuti iyo Akonadi yemunhu manejimendi manejimendi manejimendi ingangoda kuti ivo vade kugonesesa kumaakaundi akabatanidzwa pane avo masystem.
Pamusoro pekuvandudzwa kweKDE Plasma 5.13.4, KDE zvinoshandiswa, uye KDE masisitimu, vashandisi veChakra Linux zvino vanozokwanisa pamusoro peizvozvo, isa dzimwe dzazvino vhezheni yesoftware inogadzira iyo sisitimu.
Pindai zvinyorwa zvavari kugamuchira tinokwanisa kuratidza kuti zvinosanganiswa Samba inogadziridza 4.8.4, CMake 3.120.0, Rust1.28.0, OpenSSL 1.0.2, TeX Live 2018.47465, Poppler 0.67.0, Linux firmware 20180730.7b5835, pamwe nemamwe mafonti eTF uye TTF.
Chakra Linux kugadzirisa
Kugadziridza yako Chakra Linux kuisirwa uye unakirwe nezvose zvakagadziridzwa uye nezvimwe, unogona kuzviita zvakapusa.
Nokuda kweizvi ivo vanongofanirwa kuvhura iyo terminal emulator uye nekuita unotevera kuraira:
Kupindura "hongu" kune chero mibvunzo yekutsiva.
Kana iyo yekuvandudza yemapakeji yapera, ivo vanongofanirwa kuvhara yavo mushandisi chikamu kuitira kuti shanduko nyowani dzoiswa.
Nenzira imwecheteyo uye kuve iri nzira inokurudzirwa, vanogona kudzoreredza sisitimu yavo kuitira kuti shanduko dzakaitwa kuhurongwa dziitwe kubva pakutanga kwesystem.
Kune avo vanoshuvira kurodha pasi sisitimu yemufananidzo wekuparadzirwa kweLinux, vanogona kuenda kune yepamutemo webhusaiti yeiyo distro projekiti uye muchikamu chayo chekurodha vanogona kuwana iyo system mufananidzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Nyowani nyowani kuKDE Plasma yeChakra Linux yakagadzirira
Yangu inofarira desktop distro, yakatsiga uye inoshanda kwazvo. Chinhu chega chinofanirwa kuve neyakagadziridzwa iso kwemwedzi mumwe kana miviri, sezvo ini ndichiona kuti inoita manjaro. Ini zvakare ndinoona kuti vari kushingairira, neyakagadziriswa uye zvinosuruvarisa ivo vari kukambaira zvisinganzwisisike zvidiki zvikanganiso.